Eyona, Etimnga 2021
Iziyobisi Kwezemidlalo: Uluhlu Oluthintelweyo Lokunqanda Ukudopa
Isalathiso Senkampani Yeyeza
By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuvuselelwa ngo-Novemba 18, 2020.
umahluko phakathi kwe-halogalog kunye ne-novolog
Ii-cysts zamabele zizele zizele ngaphakathi ngaphakathi ebeleni. Bahlala bengenomdlavuza (benign). Unokuba ne-cysts enye okanye ezininzi zamabele. I-cyst yebele ihlala ivakalelwa ngathi ngumdiliya okanye ibhaluni egcwele amanzi, kodwa ngamanye amaxesha i-cyst yebele iziva iqinile.
Ii-cysts zamabele azidingi nyango ngaphandle kokuba i-cyst inkulu kwaye ibuhlungu okanye ayonwabanga. Kwimeko apho, ukukhupha i-fluid kwi-cyst yebele kunokunciphisa iimpawu.
Nangona ii-cysts zamabele zingafunyanwa kwabasetyhini bayo nayiphi na iminyaka, zixhaphake kakhulu kwabasetyhini ngaphambi kokuyeka ukuya exesheni, zihlala ziphantsi kweminyaka yobudala engama-50. Ama-cysts ebele aqhele ukwenzeka nakwabasetyhini abathatha unyango emva kwexesha lokuya exesheni abathatha unyango lwehomoni.
I-cyst yebele, isangqa esiseqanda okanye esingqukuva esigcwele ulwelo, inokuhamba kancinci xa ucinezela kuyo.
Ama-cysts ebele anokufunyanwa kwelinye okanye omabini amabele. Iimpawu kunye neempawu zesifuba sebele zibandakanya:
Umjikelezo ojikelezayo, ohamba ngokulula okanye oval onokuba nemiphetho egudileyo- ngesiqhelo, nangona ingahlali njalo, ibonisa ukuba ilungile
Ukukhutshwa kwengono okunokucaca, tyheli, umbala weendiza okanye umbala omdaka mnyama
Intlungu yesifuba okanye ukuthamba kwindawo yesigaxa sesifuba
Ukonyuka kobungakanani besigaxa kunye nokuthamba kwebele ngaphambi kwexesha lakho
Ukwehla kobungakanani besigaxa kunye nokusonjululwa kwezinye iimpawu emva kwexesha lakho
Ukuba ne-cysts yamabele ayinyusi umngcipheko womhlaza wamabele. Kodwa ukuba nee-cysts kungenza kube nzima ukufumana amaqhuma amabele amatsha okanye olunye utshintsho olunokufuna ukuvavanywa ngugqirha wakho. Amabele akho anokuziva ngathi unamaqhuma kwaye abuhlungu xa usexesheni, ke kubalulekile ukuba wazi indlela amabele akho avakalelwa ngayo xa usexesheni ukuze wazi ukuba kukho into etshintshayo.
Nini ukubona ugqirha
Izicubu zesifuba esiqhelekileyo zihlala ziziva ngathi zinamaqhuqhuva okanye ziqhuqhuva. Kodwa ukuba uziva isigaxa esitsha sebele esingahambiyo, siyakhula okanye siqhubeke emva komjikelo omnye okanye emibini yokuya esikhathini, bona ugqirha ngoko nangoko. Jonga ugqirha wakho ukuba utshintsha ulusu kwelinye okanye omabini amabele.
Elinye lamabele akho liqukethe i-lobes ye-glandular tishu, ezilungelelaniswe ngathi ziipalali ze-daisy. I-lobes yahlulwe yangamacandelo amancinci avelisa ubisi ngexesha lokukhulelwa kunye nokuncancisa. Amalaphu axhasayo anika isifuba imilo yawo enziwe ziithishu ezinamanqatha kunye nezihlunu ezinemicu yokudibanisa. Ii-cysts zamabele zikhula ngenxa yokufumba kolwelo ngaphakathi kwiincindi zamabele.
Ii-cysts zamabele zinokuchazwa ngokobungakanani bazo:
Microcysts inokubonwa ngexesha lokuvavanywa komfanekiso, njengemammografi okanye i-ultrasound, kodwa zincinci kakhulu ukuba zive.
Macrocysts zinkulu ngokwaneleyo ukuba zingaviwa kwaye zinokukhula zibe zi-intshi ezi-1 ukuya kwezi-2 (2.5 ukuya kwezi-5 iisentimitha) ububanzi.
Iingcali azazi kakuhle ukuba yintoni ebangela ii-cysts zamabele. Banokukhula ngenxa yotshintsho lwehomoni ukusuka exesheni ngenyanga.
Ukuchongwa kwesifuba sebele kubandakanya uvavanyo lwebele; iimvavanyo zokucinga, ezinje nge-ultrasound yebele okanye i-mammogram; kwaye mhlawumbi inaliti yenaliti okanye isifuba sebele.
Emva kokuxoxa ngeempawu zakho kunye nembali yezempilo, ugqirha wakho uya kuvavanya umzimba wesifuba kwaye ajonge nakuphi na okunye ukungaqheleki kwebele. Kungenxa yokuba ugqirha wakho akakwazi ukuxela kuvavanyo lwebele lonyango kuphela ukuba ingaba isigaxa sesifuba sisikhwekhwe, uya kudinga olunye uvavanyo. Oku kudla ngokuba luvavanyo lokucinga okanye inaliti entle.
Uvavanyo olufunekayo lunokubandakanya:
Imigrafi. Ii-cysts ezinkulu kunye namaqela ama-cysts amancinci zihlala zibonwa nge-mammography. Kodwa ii-microcysts zinokuba nzima okanye zingenakubonwa kwi-mammogram.
I-ultrasound yamabele. Olu vavanyo lunokunceda ugqirha wakho amisele ukuba ingaba isigaxa sesifuba sigcwele ulwelo okanye siqinile. Indawo egcwaliswe lulwelo ihlala ibonisa isifuba sebele. Ubunzima obubonakalayo obomeleleyo kunokwenzeka ukuba sisigaqa esingenamhlaza, njenge-fibroadenoma, kodwa amaqhuma aqinileyo nawo angaba ngumhlaza webele.
Ugqirha wakho unokuncoma i-biopsy ukuqhubela phambili ukuvavanya ubunzima obubonakala buqinile. Ukuba ugqirha wakho unokuziva ngokulula isifuba sesifuba, unokutsiba iimvavanyo zokucinga kwaye enze umnqweno wenaliti entle ukukhupha ulwelo kunye nokuwa kwecyst.
Umnqweno wenaliti entle
Ngexesha lokufuna inaliti entle, ugqirha wakho ufaka inaliti encinci kwisifuba kunye nokuzama ukurhoxisa (aspirate) ulwelo. Rhoqo, umnqweno wenaliti entle wenziwa kusetyenziswa i-ultrasound ukukhokela ukubekwa ngokuchanekileyo kwenaliti. Ukuba ulwelo luyaphuma kwaye isigaxa sebele siyaphela, ugqirha wakho unokwenza isifo se-cyst sesifuba kwangoko.
Ukuba ulwelo alunagazi kwaye lukhangeleka njengombala omdaka kwaye isigaxa sesifu siyanyamalala, akukho mfuneko yokuba uphinde uvavanywe okanye ufumane unyango.
Ukuba umbane ubonakala unegazi okanye isigaxa sebele asinyamalali, ugqirha wakho angathumela isampulu yolwelo kuvavanyo lweelebhu kwaye akuthumele kugqirha wotyando webele okanye kugqirha wonyango ngemitha- ugqirha oqeqeshelwe ukwenza iimviwo zokucinga kunye neenkqubo - zokulandela.
Ukuba akukho manzi arhoxisiweyo, Ugqirha wakho uya kuncoma uvavanyo lokucinga, njenge-mammogram yokuxilonga okanye i-ultrasound. Ukunqongophala kolwelo okanye isifuba sebele esinganyamalali emva kokufuna kuphakamisa ukuba isifuba sesifuba-okanye ubuncinci inxalenye yaso-siqinile. Isampulu yethishu inokuqokelelwa ukujonga umhlaza.
Ngexesha lokufuna inaliti entle, inaliti ekhethekileyo ifakwa kwisigaxa sesifuba, kwaye nakuphi na ukungcola kususwa (aspirated). I-Ultrasound - inkqubo esebenzisa amaza esandi ukwenza imifanekiso yesifuba sakho esweni-inokusetyenziselwa ukunceda ukubeka inaliti.
Akukho nyango luyimfuneko kwiicyst cyst ezilula - ezo zigcwele ulwelo kwaye azibangeli zimpawu - eziqinisekisiweyo kwisifuba se-ultrasound okanye emva kokufuna inaliti entle. Ii-cysts ezininzi ziya kuthi shwaka zingabikho unyango. Ukuba i-cyst iyaqhubeka, iziva iqinile okanye uqaphela utshintsho lolusu kulusu kwi-cyst, landela ugqirha wakho.
Ukufuna inaliti entle kungasetyenziselwa ukuxilonga nokunyanga i-cyst yebele ukuba lonke ulwelo lunokususwa kwi-cyst ngexesha lenkqubo, emva koko isigaqa sakho sebele siyanyamalala kwaye iimpawu zakho zisonjululwe.
Kwezinye ii-cysts zamabele, nangona kunjalo, kuya kufuneka ukuba ukhuphe amanzi ngaphezulu kwesinye. Ama-cysts aphindaphindiweyo okanye amatsha aqhelekileyo. Ukuba i-cyst yebele iqhubeka ukuya kwimizuzu emibini ukuya kwemithathu yokuya esikhathini kwaye ikhule ibe nkulu, jonga ugqirha wakho ukuze uphinde uvavanywe.
Sebenzisa iipilisi zokulawula ukuzalwa (izinto zokucwangcisa ngomlomo) ukulawula imijikelo yakho yokuya exesheni kunokunceda ukunciphisa ukuphindaphinda kwamaqhuqhuva ebele. Kodwa ngenxa yeziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho, iipilisi zolawulo lokuzalwa okanye olunye unyango lwehomoni, njenge tamoxifen, ihlala icetyiswa kuphela kubafazi abaneempawu ezinzima. Ukuyeka unyango lwehomoni emva kokuyeka ukuya exesheni kunokunceda ekuthinteleni ii-cysts zamabele.
Utyando lokususa i-cyst yebele luyimfuneko kuphela kwiimeko ezingaqhelekanga. Ugqirha lunokuqwalaselwa ukuba isifuba esingathandekiyo sesifuba siphinda sibuyele emva kwenyanga okanye ukuba isifuba sebele sine-fluid ene-blood-tinged fluid okanye sibonisa ezinye iimpawu ezixhalabisayo.
Indlela yokuphila kunye namayeza asekhaya
Ukunciphisa ukungonwabi okunxulunyaniswa ne-cysts yebele, unokuzama la manyathelo:
Nxiba ibra exhasayo. Ukuxhasa amabele akho ngebra ehambelana kakuhle kunokunceda ekunciphiseni ukungonwabi okuthile.
Faka isicelo sokucinezelwa. Nokuba icompress eshushu okanye ipakethi yomkhenkce inokunceda ekuthomalaliseni iintlungu.
Gwema i-caffeine. Izifundo khange zibonise ikhonkco phakathi kwe-caffeine kunye ne-cysts yebele. Nangona kunjalo, abanye abantu basetyhini bafumana ukukhululeka kweempawu emva kokuphelisa i-caffeine kwizidlo zabo. Cinga ukunciphisa okanye ukuphelisa i-caffeine-kwiziselo, nakukutya okufana netshokholethi- ukubona ukuba iimpawu zakho ziyaphucuka na.
Cinga ukuzama amayeza eentlungu zekhawuntari ukuba ugqirha uyabancoma. Ezinye iintlobo zentlungu yesifuba zinokuncitshiswa kukusetyenziswa kwe-acetaminophen (iTylenol, ezinye) okanye iziyobisi ezingezizo ezokulwa nokudumba, ezinje nge-ibuprofen (i-Advil, i-Motrin IB, ezinye) okanye i-sodium ye-naproxen (i-Aleve, abanye).
Thetha nogqirha wakho malunga naziphi na iivithamini, amayeza esintu okanye ezinye izongezo zokutya ozithathayo okanye ocinga ukuzithatha. Akukho bungqina bokuba nayiphi na le mveliso inceda iimpawu ze-cyst yebele, kwaye zinokubangela iziphumo ebezingalindelekanga.
Uya kubona umboneleli wakho wokuqala ukuba avavanye amabele amatsha okanye utshintsho kwiibele zakho. Unokuthunyelwa kwingcali yezempilo yamabele esekwe kuvavanyo lwebele lweklinikhi okanye kwiziphumo zovavanyo lokucinga.
Uvavanyo lokuqala lujolise kwimbali yakho yonyango. Uya kuxoxa ngeempawu zakho, ubudlelwane babo kumjikelezo wakho wokuya esikhathini kunye nolunye ulwazi olufanelekileyo. Ukulungiselela le ngxoxo, yenza uluhlu olubandakanya:
Zonke iimpawu zakho, Nokuba zibonakala zingadibani nesizathu sokuba ucwangcise ixesha lokuqeshwa
Ulwazi oluphambili lomntu, kubandakanya uxinzelelo olukhulu okanye utshintsho lwamva nje lobomi
Onke amayeza, iivithamini, amayeza esintu kunye nezongezo oqhele ukuzithatha
Imibuzo yokubuza ugqirha wakho, Ukusuka kwezona zibalulekileyo ukuya kwezona zibalulekileyo ukuze uqiniseke ukuba uyagubungela amanqaku oxhalabele wona
Imibuzo esisiseko yokubuza ugqirha ibandakanya:
Yintoni enokubangela iimpawu zam?
Ngaba ukuba nee-cysts kuwonyusa umngcipheko wam womhlaza webele?
Zeziphi iintlobo zovavanyo endizifunayo?
Ngaba ndiza kufuna unyango? Ukuba kunjalo, loluphi unyango olufumanekayo?
Ngaba ikhona imiqobo ekufuneka ndiyilandele?
Ngaba zikhona izinto ezishicilelweyo endinokuya nazo ekhaya? Zeziphi iwebhusayithi ozicebisayo?
Ukuba awuqondi into ethile, unganqikazi ukubuza imibuzo.
Yintoni onokuyilindela kugqirha wakho
Yilungele ukuphendula imibuzo enokuyibuza ugqirha, njenge:
Uwuqaphele nini okokuqala umqala wamabele okanye iqhuma?
Ngaba uluphawule utshintsho kubungakanani besifuba okanye iqhuma?
Zeziphi iimpawu okhe wahlangabezana nazo, kwaye unexesha elingakanani unazo?
Ngaba iimpawu zakho zenzeka kwelinye okanye omabini amabele?
Ngaba zikhona iimpawu eziguqulweyo ngokuhamba kwexesha?
Ngaba Unentlungu Ebeleni? Ukuba kunjalo, ingaba buqatha kangakanani?
Ngaba unayo incindi yengono? Ukuba kunjalo, ngaba kwenzeka kwelinye okanye omabini amabele?
Umjikelo wakho wokuya exesheni uwuchaphazela njani umqala wamabele okanye iqhuma?
Yayiphi imammogram yakho yokugqibela?
Ngaba unayo imbali yosapho yamaqhuqhuva ebele okanye amaqhuma?
Ngaba wawukhe wanaso isifuba sebele okanye iqhuma, ibeleopsy okanye umhlaza webele?
© 1998-2019 Mayo Isiseko seMfundo yezoNyango noPhando (MFMER). Onke amalungelo agciniwe. Imimmiselo yokusebenzisa .
Imixholo Yezempilo Yeharvard Az
I-Pilocarpine eye Drops
Iziyobisi A Ukuya Ku-Z
Ihlangana njani i-Shriners kunye neeFreemason
Isisombululo se-Tobramycin Ophthalmic
Ukuseta i-Desktop ekude kwiWindows 7 yeNethiwekhi yasekhaya
Ungayongeza njani i-Apple Loops kwiProjekthi yakho yeLogic Pro X
Indlela yokusebenzisa iiRedstone Comparators kwiMinecraft
Umfaniso womdlali webhola ekhatywayo waseMelika
Izixhobo Zokufunda, Iividiyo Zevidiyo, Zonke Iinkqubo Zokufunda Kwaye Azikho KuphelaEzi Zixhobo Zenzelwe Kuphela Iinjongo Zemfundo Kwaye Zenzelwa Ukuba Kwenzelwe Ingcebiso Kwezonyango, Isifo Okanye Unyango.
Uyilo Lwewebhu Kunye Nophuhliso
Izixhobo Zombane Zabathengi
isetyenziselwa ntoni vascepa
ii-faqs zokuvavanywa kwamathe
iziphumo ebezingalindelekanga zolawulo lokuzalwa
Ityala yethylenol ngokobunzima kubantu abadala
Copyright ©2021 varixcare.cz